Goodax Barre oo si kulul uga horyimid dhismaha Maamulka Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Goodax Barre oo si kulul uga horyimid dhismaha Maamulka Hir-Shabeelle
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa si dag uga soo horjeestay dhismaha Cusub ee Maamulka Hir-Shabeelle iyo sida ay u wado dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaan Goodax Barre ayaa sheegay in Hir-Shabeelle ay nasiib u yeelatay in dowlad kasta ee dalka soo marta ay dhoodhoobato Madaxweyne dano gaar ah laga leeyahay taasina ay nasiib darro tahay.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo Wareysi siiyay Holtv waxaa uu sheegay inay nasiib darro weyn tahay.
Waxaa uu Eedeyn kulul uu u jeediyay Madaxweynaha Cusub ee Maamulka Hir-Shabeelle oo uu sheegay in uu yahay Nin qabiil oo aan ka Shaqeyneyn danta dadka ku nool degaannada Hir-Shabeelle. Hadalka Wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cab
dullaahi Goodax Barre ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dadka ku nool Gobolka Hiiraan ay diidan yihiin sida lagu wado dhismaha Hir-Shabeelle, sidoo kalena uu dagaal ka dhacay Maanta Magaalada Beledweyne.
Previous articleDagaal & banaanbaxyo ka socda Magaalada Beledweyne
Next articleBaarlamaanka Kenya oo ka dooday khilaafka Soomaaliya